न्युड सिनलाई मैले सहज रूपमै लिए – नायिका अरुणिमा लामा | Glamour Nepal
चलचित्रमा किन यस्तो भूमिकामा काम गर्नुभएको ?
नेपालमा मैले खेल्ने जस्ता चलचित्र बनिरहेका थिएनन्, साडी, चोलो, फरिया र रोनाधोनावाला चलचित्रका निम्ति मैले आफूलाई फिट मानेकी पनि थिइन्। उकेश जीले न्युड सिनसहितको फिल्मको अफर ल्याएपछि म तयार भए, किनभने मैले खोजेअनुसारको चलचित्र थियो यो। न्युड सिनलाई मैले सहज रूपमै लिए।
न्युड सिनमा काम गर्दा कस्तो अनुभूति भयो ?
मैले पटक-पटक स्त्रिmप्ट पढिसकेकी थिएँ। निर्देशकसँग फोनमा पनि बारम्बार कुरा भैरहेको थियो। सुटिङ सुरु भएको केही दिनमै न्युड पेन्टिङको सिन खिचियो। म नर्भसजस्ती भएकी थिएँ, तर सुटिङ सुरु भएपछि क्यामेरामेन, निर्देशक र नायक राजेश हमालको सहयोगले मलाई धेरै फेमिलियर बनायो र यो सिन दिन सक्छु भन्ने लाग्यो। पछि सिन हेरिसकेपछि मेरो ढाडसम्म मात्र खिचिएको देखें। त्यो पर्याप्त लागेन। सुटिङ प्याकअप भैसकेको अवस्थामा मैले फेरि नायक हमालसँग आग्रह गरेर नितम्बसम्म देखिने गरी सुट गर्न भने, अन्ततः भने जस्तै प्रोपर न्युड सिन जस्तो देखियो।
पूर्ण न्युड हुँदा लाज कत्तिको लाग्यो ?
मेरो चाहना नै ग्लामर मूभिमा बोल्ड लेडीको भूमिका गर्ने थियो। मैले न्युड सिनका लागि आफूलाई मानसिक रूपमा तयार पारेकी थिएँ तर नारी भएका कारण नाङ्गो हुँदा केही संकोच हुँदो रहेछ। सुटिङ युनिटका त्यति धेरै क्रुका अघि अपप्ठयारो एवं लाज लाग्यो। त्यसपछि युनिटका अधिकांशलाई हटाएर सीमित पाँच जनाको टिममा आफूलाई उभ्याएँ।
चलचित्रका लागि न्युड सिन कति अपरिहार्य थियो ? तपाईंको लभ मेकिङ सिन पनि छ रे ?
चलचित्रको कथाअनुसार न्युड पेन्टिङ नायक राजेश हमालको डि्रम प्रोजेक्ट हुन्छ, शीर्ष नायिका करिश्मा मानन्धरबाट त्यो डि्रम पूरा हुन नसकेपछि मैले उक्त भूमिकामा काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण न्युड सिन आवश्यक नै थियो। नायक हमालसँग मेरो सेक्सुअल सिन पनि छ। अभिनयका क्रममा नेपालमा उहाँ जस्तो सेक्सी पुरुष अरू कोही छ जस्तो लागेन।